Nhau - Cetylpyridinium chloride seMarapirwo eCOVID-19
Cetylpyridinium chloride seMishonga yeCOVID-19
Iyo yekuyedza yakaratidza yakakwira-frequency yequaternary ammonium disinfectants sekurapa kwehutachiona hwakawanda, kusanganisira coronaviruses: izvi zvinoita nekumisa inodzivirira lipid kupfeka iyo yakafukidza hutachiona seSARS-CoV-2 inovimba nayo. Quaternary ammonium compounds inokurudzirwa zvakanyanya kuuraya hutachiona uye pane zvigadzirwa zvinopfuura mazana matatu paEPA Rondedzero N: Mishonga inouraya utachiona yekushandisa kurwisa SARS-CoV-2 (Supplementary Material. makemikari pane EPA rondedzero akataurwa uye> 140 inogona kudzima hutachiona mumaminetsi mashoma (18).
Ruzivo urwu rwakatitungamira pakutsvaga kwakakura kwequaternary ammonium makomputa ane chiitiko chinorwisa coronaviruses uye zvingangoita kuzivikanwa kwemakemikari akange atoedzwa mukiriniki uye anogona kushandiswa senge ingangoita kurapwa kweCOVID-19. Imwe yemishonga inouraya utachiona iyo yakaratidzirwa kuve inoparadza hutachiona (Supplementary Material) uye inoshandiswa zvakanyanya muzvigadzirwa zvekuchengetedza pachako ndeye cetylpyridinium chloride. Ichi chigumbuso chinowanikwa kazhinji mumushambidzwa wemuromo uye chakanyorwa neDFA seGenerally Inotarisirwa seChengetedzeka (GRAS) zvekuti iri kushandiswawo seantimicrobial mumiriri wenyama uye yehuku zvigadzirwa (kusvika 1%). Cetylpyridinium chloride yakashandiswa mumakiriniki akawanda, kusanganisira sekurapa kubva kuzvirwere zvekufema zvichisimbisa mashandisiro ayo seantiviral. Cetylpyridinium inogona kusimudzira hutachiona kusaita nekuparadza kapidhi pamwe neyakaitwa lysosomotropic chiito, icho, sezvakakurukurwa pamusoro, chinowanzoitika kumakomputa eammatonium. Izvi zvinomutsa mubvunzo wekuti mimwe yemishonga inozivikanwa neantiviral chiitiko kupesana neSARS-CoV-2 in vitro inoita zvakafanana, kureva kuti inogona kuparadza hutachiona capsid pamwe nekuunganidza mu lysosome kana endosomes uye pakupedzisira ichivhara kupinda kwehutachiona. Zvimwe zvakaburitswa zvidzidzo zvakaratidza kuti mhedzisiro iyi inogona kuderedzwa nekushandiswa kweCathepsin-L inhibitors.
Quaternary ammonium compounds ine inozivikanwa coronavirus chiitiko
Ammonium Chloride Murine coronavirus, hepatitis C, Lysosomotropic Ehe Zvishandiso zvakasiyana siyana zvinosanganisira metabolic acidosis.
Cetylpyridinium chloride Influenza, hepatitis B, polioovirus 1 Inonanga capsid uye ndeye lysosomotropic Ehe, GRAS Antiseptic, kushambidza muromo, kukosora lozenges, zvigadzirwa zvekuchengetedza zvega, vamiririri vekuchenesa